ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com လင်ကြီးငုတ်တုတ် နဲ့ (၁၈+)
မှတ်​ချက်​-​အောစာအုပ်​ အစ/ဆုံး ဖတ်​ပီးတဲ့အထိ မထု​သေးရင်​ ဆြာပဲ့
နက်မှောင်ပြောင်လက်နေသော ၂၀၁၁ခုနှစ်မော်ဒယ်လ် မာစီဒီး ဂျီအယ်လ် ၅၅၀ ကားကြီး ကို.. ဦးညိုမောင်းသည်ကြက်မွေးတံမြက်စီးနဲ့ဖုံသုတ်နေစဉ်..သူဌေးကတော်ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး..တိုက်ကြီးထဲက ထွက်လာတာတွေ့လို့ ကားကြီး ရဲ့ အနောက်ဖက် တံခါး ကို ကြိုတင်ဖွင့်ပေးထားလိုက် သည် . .။ ဦးညိုမောင်း သည် “ ဖြိုးကြွယ်ဝ ရိပ်ငြိမ် ”ရဲ့ “ယာဉ်မောင်း တာဝန်ခံ ” ဖြစ် သည် . .။ယာဉ်မောင်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အနက် အသက်လဲ အကြီးဆုံး . .သူဌေး ရဲ့ ကားတွေ နဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ ကို စီစဉ် ကိုင်တွယ်ရတဲ့ တာဝန်ခံ တယောက် ဖြစ်သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ကားပေါ်ကို လှမ်းတက်ဟန်ပြင်တုံး . .တိုက်အိမ်ကြီး ရဲ့ နဘေး က မြက်ခင်းပြင်မှာရပ်ပြီး ဂေါက်သီး ကျွင်းစိမ် နေသော ခင်ပွန်းသည် ဦးဇောတိက ကို တွေ့လိုက်လိ်ု့ . .( ကိုကြီး . ၀င့်ဖူး .ဂျင်မ် သွားလိုက်အုံးမယ် . .) လို့ နုတ်ဆက်သလို ပြောလိုက်ပါ သည် ..။
ဦးဇောတိက က ခေါင်းညှိမ့် ကာ ပြုံးပြလိုက်ပြီး . .ဆက်ပြီး ကျွင်းစိမ် တဲ့ အလုပ် ကို အာ
ရုံထားနေသည် . .။ ဦးညိုမောင်းသည်တိုက်အိမ်ကြီးရဲ့ဆင်ဝင်အောက်ကနေကားမောင်းထွက်လိုက်တာနဲ့ခြံဝမှာရှိနေတဲ့ကာကီ ယူနီဖေါင်းဝတ်လုံခြုံရေးကိုသိန်းကခြံတံခါးကြီးကို..အဆင်သင့်ဖွင့်ပေးထားသည် . .။ ဦးညိုမောင်း က .. (ဆရာမ .. ဘယ် ကို မောင်းရမလဲ . .) လို့ မေးသည် . .။ ( အရင်ဆုံး . .မော်ပွင့် ကို ၀င်ခေါ်မယ် . .ပြီးတော့ ဂျင်မ် ကို သွားမယ် . .) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် သူမရဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း မော်မော်ပွင့် နဲ့ အမြဲ ဂျင်မ်သွား သည် . .။ မော်မော်ပွင့် ရဲ့ ခင်ပွန်း သည် နိုင်ငံခြားသင်္ဘော ကက်ပတိန် တယောက် ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ရှိမနေတာက များသည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ဦးဇောတိက ၇ဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု နဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ကြောင့် လူတွေ က ရှေ့က“ဒေါ်” တပ်ပြီး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လို့ ခေါ်ကြပေမဲ့.. အသက် က ၂၅ နှစ် မပြည့်သေး . .။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ကျိကျိတက် ချမ်းသာသော ဦးဇောတိက ကို သူမ ရဲ့ အဖေအရွယ် ဖြစ်ပေမဲ့ မိသားစု ကိုငဲ့ကွက်တဲ့အနေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့..တာဖြစ်သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ မိဘတို့ ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ရှုံး လို့ အလွန်ခက်ခဲနေချိန်မှာ ..ဦးဇောတိက က သူတို့ ကို အနောက်က ငွေထုတ်ပေးပြီး . .အထောက်အကူပေး ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ မိဘတွေ ဟာဘ၀မပျက်ဘဲ..အိနြေ္ဒမပျက် ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူး အခံ ရှိနေဆဲ..ဦးဇောတိက သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ မိဘတွေ ကျေနပ်လောက်အောင် ငွေ နဲ့ပေါက်ပြီး ..ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ယူခဲ့တာ ဖြစ်သည် . .။.ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ မိဘတွေ မငြင်းနိုင်လောက်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ နဲ့ မြေခြံ တိုက်တွေ တင်တောင်းတာကြောင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ မိဘတွေ က အသက်ကြီး သော အဖိုးကြီး ဦးဇောတိက ကို မငြင်းပယ်နိုင်ခဲ့ကြပေ . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အဖို့ ဦးဇောတိက ရဲ့ သမီးအရွယ် ဇနီးသည် ဖြစ်လာရတာကြောင့်..သူမ မိဘတွေတင်မက တဆွေတမျိုးလုံး..ဦးဇောတိက ရဲ့ အရှိန် နဲ့ ကြီးပွားလာ ကြပြီး . .သူမ အနေနဲ့လဲ ဦးဇောတိကနဲ့အတူသြစတြေလျား..ဥရောပ..အမေရိကန်နဲ့..အာရှတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ကမ္ဘာပတ် နိုင်ခဲ့လေ သည် . .။ သို့ပေမဲ့ ဘယ်လိုဘဲ ငွေကြေး ပစ္စည်းဥစ္စာ တွေ အလျံအပယ် ပြည့်စုံ နေပေမဲ့ မချစ်မနှစ်သက်ဘဲ ပေါင်းသင်းခဲ့ ရတဲ့ ခင်ပွန်းသည် ကလဲ အသက်အရွယ်ထောက် နေပြီမို့ . .ငယ်လင် ငယ်မယားတွေ လို . .အိပ်ရာဝင် ချစ်စခန်းဖွင့် ကာမစပ်ယှက် တဲ့ နေရာမှာ နုပျို တောင့်တင်း ဆူဖြိုးတဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကျေနပ်လောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ . .။ ယူခါစညားခါစအချိန်မှာပင်ဦးဇောတိကသည်..ကာမစပ်ယှက်နေစဉ်မှာတောင်လိင်တန်ပျော့ကျညှိုးငယ်တာ တွေ..ဖြစ်ပျက်တာကြောင့် .လိင်တန် မာကျောတောင့်တင်းစေ မည့် နိုင်ငံခြားဆေး . .မြန်မာဆေးများ အမျိုးမျိုး သုံးစွဲပေမဲ့ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုဆိုးရွား လာပြီး . .ဦးဇောတိက သည် လုံးဝ ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်သွားခဲ့ရလေ သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ဦးဇောတိက နဲ့ မယူခင်ကထဲက ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ခါ လေ့ကျင့်ခဏ်းတွေ လုပ် သူမို့ သူမ ကိုယ်လုံးသည် အလွန်ပြေပြစ် အချိုးကျ ခဲ့သည် . .။ ဦးဇောတိက နဲ့ ယူပြီး နောက်ပိုင်းမှာလဲ တနေ့တနေ့ မယ်မယ်ရရ လုပ်စရာ မလိုတဲ့ အလွန် အမင်း ချမ်းသာ တဲ့ သူဌေးကတော်မို့ . .အမြဲ ဂျင်မ်သွားကာ လေ့ကျင့်ခဏ်း အမျိုးမျိုး လုပ်နေတာမို့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ဆန့်ကျင်ဖက် ဖိုသတ္တ၀ါတွေ ...ရဲ့..တပ်မက် စိတ်ဝင်စား တဲ့ ပစ်မှတ်တခု ဖြစ်လာရပေ သည် . .။ ဦးဇောတိကရဲ့၏နံမည်အပြည့်အစုံမှာ..ဇောတိကမင်းသိန်းဖြစ်သည်..။ ဇောတိကမင်းသိန်းသည်အလွန်ပြေပြစ်ချောမောတောင့်တင်းတဲ့ ဇနီးမယားလေး နဘေးမှာ ရှိနေရက်နဲ့ . .ဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမို့ စိတ်ဓါတ် ကျဆင်း ပြီး . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အာသာများ ပြေလေမလားဆိုပြီး . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို သူ့ လက်ချောင်းတွေ နဲ့ ကလိပေး ပြီး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ပါးစပ်နဲ့ အာသာဖြေပေး . .( ဘာဂျာမှုတ် ) လေ သည် . .။ ဦးဇောတိက မင်းသိန်း သည်.. ( ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုး တာ ဆေးကြောင့်လေး ရ သည် . .) ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ . .အာသာ ပြေအောင် ဘာဂျာကိုင်ပေးခဲ့တာ..ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ကာမ စိတ်တွေ ပိုမိုထကြွအောင် . .ဆွပေးသလို ဖြစ်ရပြီး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးလဲ မခံရရင် မနေနိုင်လောက်အောင် ..သူမ အင်္ဂါစပ်ထဲက ယားယံ..ရပြီး . .နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ညီမ ၀မ်းကွဲဆီ က ရော်ဘာ လိင်တန်ဆာ အတု မှာယူကာ မိမိဖါသာ ထိုးဆောင့်ပြီး အာသာ ဖြေရတော့ သည် . .။ ထိုသို့ အာသာဖြေခြင်း သည် တကယ့် ယောင်္ကျား တန်ဆာ စစ်စစ် နဲ့ ဆက်ဆံရသလို မဟုတ်ဘဲ . .သူမ ရဲ့ ကာမ ဆန္ဒ ကို ငြိမ်းအေးသွားအောင် အပြည့်အ၀ မစွမ်းဆောင်နိုင် ခဲ့ပေ . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ တကယ့် ယောင်္ကျား စစ် စစ် ရဲ့ လိင်တန် နဲ့ ခံလိုက်ချင်စိတ်တွေ အရမ်းကို ဖြစ်ပေါ်နေရပေ သည် . .။ သည်အချိန်မှာခင်ပွန်းဖြစ်သူ..ဦးဇောတိက မင်းသိန်း သည် စိတ် မလျော့သေးဘဲ နိုင်ငံခြားကို သွားရောက်ပြီး သူ့ ပန်းသေ ရောဂါ ကို ကုသလို ကြောင်း ဆရာဝန်တွေ ကို တိုင်ပင်ကာ ဆရာဝန်များ ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် နဲ့ နိုင်ငံခြား မှာ ဆေးကုရန် စီစဉ်လေ သည် . .။ မကြာခင်မှာဘဲ ဦးဇောတိက မင်းသိန်း သည် အမေရိကန်ပြည် နယူးရောက်မြို့ရှိ နံမည်ကြီး ဆေးရုံကြီးတခု မှာ ဆေးကုသမှု ခံယူဖို့ ဇနီးချောလေး ၀င့်ဝင့်ဖူး ..နဲ့အတူ ထွက်ခွာခဲ့လေ သည် .. ။ နယူးရောက်မြို့ မှာ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ရဲ့ တူ အရင်းခေါက်ခေါက် ဖြစ်တဲ့ ဘိုဘိုသိန်း ၇ှိနေတာကြောင့် ဘိုဘိုသိန်းက ခုလို ဆေးကုဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ . .။
ဘိုဘိုသိန်း သည် နယူးရောက်မြို့ ကြီး ရဲ့ အပြင်ဘက် လောင်းအိုင်လင်း ဆိုတဲ့ အရပ် တွင် အိမ် သားသားနားနား ကြီးကြီးမားမား နဲ့ နေထိုင်နေသူ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်က ပညာဘွဲ့ ရရှိကာ . .အင်ဂျင်နီယာ အလုပ် ကို လုပ်နေသူ ဖြစ်ပေ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း သည် အမေရိကန်ပြည် ကို..ကျောင်းသားဘ၀ နဲ့ ရောက်ကထဲက မျိုးရိုး နဲ့ ချမ်းသာခဲ့တဲ့ သူဌေးသားမို့ အပျော်အပါး လိုက်စားကာ သုံးဖြုံးခဲ့သူ တယောက်ဖြစ်သည် . .။ အမေရိကန် အဖြူမတွေ နဲ့ ပျော်ပါးနေသူ ဖြစ်ပြီး ယခုထိ အိမ်ထောင်မပြုသေး သူ လူပျိုတယောက်လဲ ဖြစ်လေ သည် .. ။ သူ သည် ကြီးမားတဲ့ အိပ်ခန်း ၅ခန်းပါ အိမ်ကြီး မှာ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ မိုးဇက် ဆို သည့် ကမ္ဘောဒီးယား လူမျိုး နဲ့ နေသည် .. ။ များသောအားဖြင့် ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ မိုးဇက်နေတဲ့ အိမ်ကြီးမှာ မိန်းကလေးတွေ တရုံးရုံး နဲ့ ရှိနေတတ် သည် .. ။ သူရဲ့ ဘကြီး ဖြစ်သူ ဦးဇောတိက မင်းသိန်း လာပြီး ဆေးကုသမည် ဆိုလို့ ဘိုဘိုသိန်း သည် အိမ် မှာ လူရှင်းထားသည် . .။ မိုးဇက်ကို လဲ ဘကြီး ရှိနေတဲ့ အတောအတွင်း..တခြားမှာ နေပေးရန် ပြောလိုက်လို့ မိုးဇက်လဲ သူ့ အမျိုးတွေ ရှိတဲ့ နယူးရောက် မြို့ထဲမှာ သွားနေပေးသည် ..။ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း နဲ့ ဇနီးချောလေး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးတို့ ရောက်လာသောအခါ အင်မတန်မှ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ လူနေရပ်ကွက်...မှာ ကြီးမားခန့်ထည် တဲ့ အိမ်ကြီး မှာ တည်းခိုရပြီး ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရန် သူတို့ နဲ့ ဆွေမျိုးတော်တဲ့ ဒေါ်အေမီ ဆိုတဲ့ အသက်၅၀ခန့် မိန်းမ တယောက် က ကနေဒါနိုင်ငံမှလာရောက်ပြီး ကူညီလေ သည် . .။ ဂျေအက်ဖ်ကေ နယူးရောက်လေဆိပ် မှာ ကြိုနေတဲ့ ဘိုဘိုသိန်း သည် သူ့ ဘကြီး ရဲ့ ဇနီးချောလေး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို လေဆိပ်မှာ စ မြင်မြင်ချင်းကထဲက သဘောကျ စွဲလန်းသွားရလေ သည် . .။ ဘကြီး ရဲ့ ဇနီးလေးမို့ မကောင်းတတ်တာကြောင့် ခပ်တန်းတန်း ပုံမှန်နေထိုင်၇ပေမဲ့ လူအလစ်ဆိုရင် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ..တပ်မက်မောစွာနဲ့ ခိုးခိုးကြည့်ကာ ပြစ်မှားနေပေ သည် . .။ ဦးဇောတိကမင်းသိန်းတို့လဲ သန့်ရှင်းသားနားတဲ့ ဘိုဘိုသိန်း ရဲ့အိမ်ကြီး မှာ နေထိုင်ရတာ သဘောကျကြပေသည် .. ။ ဒေါ်အေမီ ကလဲ မြန်မာ အစားအသောက်များ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသလို ဘိုဘိုသိန်းကလဲ နံမည်ကြီး တရုပ်..ကုလားဆိုင်ကြီးတွေကနေဘကြီးလင်မယားကို..ကောင်းနိုးရာရာတွေ မှာကျွေး . .ခေါ်သွားပြီး ကျွေး လေ သည် .. ။ ဘိုဘိုသိန်း သည် မိမိထက် ၃နှစ်သာ ကြီးသော ဘကြီး ရဲ့ ဇနီးလေး ကို ( မမဖူး .) လို့ ဘဲ ခေါ်လေ သည် ..။ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ကလဲ . .( မင်း . .မမဖူး . .မင်း..မမဖူး . .) လို့ သုံးနှုံးတာကြောင့်ပါ . .။ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း သည် ညဘက်မှာ တရားထိုင်တတ် တော့ အိမ်ကြီး ရဲ့ အပေါ်ထပ် က ဘုရားခန်းမှာ တရားထိုင် လေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး မှာ တယောက်ထဲ ပျင်းတာကြောင့် အိမ်ကြီး ရဲ့ အောက်ထပ် မှာ တီဗွီ ထိုင်ကြည့် တတ်ပြီး အလုပ်က ပြန်လာသော ဘိုဘိုသိန်း နဲ့စကား လက်ဆုံကျတတ်ပြီး ..ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ တယောက်နဲ့တယောက်..ပို ရင်းနှီးလာကြလေ သည် ..။ဒေါ်အေမီမှာ သူမ တာဝန်တွေ ပြီးပါ က သူမ ကို ပေးထားတဲ့ အခန်းမှာဘဲ စာဖတ်နေတတ် သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့တင်သားတွေဟာ..စွင့်ကားဝိုင်းစက်ပြီး အနောက်ဖက်ကို ကောက်ထွက်နေတာကြောင့် ကြည့်မိတိုင်းသွားရေယိုရပြီး..မမဖူးကို..လုပ်လိုက်ရရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလေမလဲ လို့ စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားနေရတာ အကြိမ်ကြိမ် ပါဘဲ . . .။ မမဖူး ရဲ့ ဖင်တွေ ဟာ လှလွန်းတယ် လို့ သူ ထင် သည် . .။မမဖူး လမ်းလျောက်သွားတာကို တွေ့ရရင် . .ရင်တွေတုန် . .စိတ်တွေ လှုပ်ရှားရ သည် . .။ ဒီနေ့လဲ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ခင်ပွန်းသည် ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ..ခုလောက်ဆို၇င်တော့ တရားထိုင်တာ ပြီးလောက်ပြီ ဆိုပြီး အိမ်ကြီးပေါ်တက်သွားတော့... ဦးဇောတိက မင်းသိန်း သည် တခေါခေါ နဲ့ အိပ်မောကျနေတာ တွေ့လိုက်ရပေ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း သည် သူ့ဘကြီး သည် ကို လာရင်းအကြောင်းကို သိပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ ဘကြီး ဟာ လိင်ဆက်ဆံတာ မလုပ်နိုင်တာကြောင့် သူ က မမဖူးလို့ ခေါ်နေတဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးတယောက် အဘယ်မျှ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမည် ကို သဘောပေါက်နေသူလဲ ဖြစ်ပေရာ . .မမဖူး ကို စားချင်ဝါးချင်စိတ်တွေ က ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်နေရပြီး . .အခွင့်အလမ်း ကို ချောင်းနေသူလဲ ဖြစ်ပေ သည် . .။အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ပြီး တီဗွီ ဖွင့်ကာ ထိုင်ကြည့်နေတော့ . .အမေရိကန် ရုပ်၇ှင်ကား . . ( သစ္စာမဲ့ခြင်း ) လို့ အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ပြနေတာနဲ့ ဘာရယ်မဟုတ် ထိုင်ကြည့်မိနေသည် . .။ မင်းသမီး ဒိုင်ရင်းလိန်း သည် သူ့ ခင်ပွန်း ရစ်ချတ်ဂီရာ ရှိရက် နဲ့ သူမ ထက် ငယ်သော လူငယ်တယောက် ကို ရင်ခုံမိပြီး ထို လူငယ် နဲ့ ဖေါက်ပြန်သော ဇာတ်လမ်း ဖြစ် သည် . .။ ကာမ ဆက်ဆံတဲ့ အခန်းတွေ အများကြီး ပါတာမို့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး မှာ ကြည့်၇င်း စိတ်တွေ နိုးကြွလာရလေ သည် . .။ ထို အချိန်မှာ ဘိုဘိုသိန်း လဲ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အနား ကို လာထိုင် သည် . .။ သူလာထိုင်မှဘဲ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အနောက်ဖက် အိမ်သာထဲမှာ .. မော်တော်ဆတ် . .မတ်တပ်ဆော် တဲ့ အခန်း ပြတော့ .. တဘန်းဘန်း နဲ့ ကြုံးလိုးနေတာတွေ ကို ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ အတူတူ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အိမ်ကြီး ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲ နှစ်ယောက်ထဲ ကြည့်နေ ကြတာမို့ နှစ်ဦးစလုံး စိတ်များ နိုးကြွ ဖေါက်ပြန်လာကြပေ သည် . .။ ( ပြတာ တော်တော် ကြမ်းတယ်နော် ..) လို့ စကားစလိုက်သော ဘိုဘိုသိန်း ကို ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး က ..( ဟုတ်တယ် . .ဘိုဘို . .သိပ်ကြမ်းတာဘဲ . .) လို့ ပြန်ပြောရင်း . .ရေငတ်လာတာကြောင့် မီးဖိုခန်းထဲကို ထ လျောက်ခဲ့သည် ..။ ရေခဲသေတ္တာကြီးထဲက ရေသန့်ပုလင်းတပုလင်း ကို ထုတ်ဖွင့်ကာ မော့သောက် သည် .. ။ ရေအေးအေး က သူမ ရဲ့ ပူလောင်နေတဲ့ ကာမရာဂစိတ်တွေကို လျော့ကျသက်သာစေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး . .။ဘိုဘို သူ့အနောက်မှာကပ်ရက် ရောက်နေတာ သတိပြုမိလိုက် သည် ..။ ( မမဖူး . .) ( ဟင် . .ဘာလဲ ဘိုဘို . .) ( မမဖူး .သိပ်လှတာဘဲဗျာ . .) ( အို . .ဘိုဘို က မြှောက်နေပြန်ပြီ . ..) ( တကယ်ပါ မမဖူး . .ကျနော်လေ . .မမဖူး ကို လေဆိပ်မှာ စတွေ့ကထဲက အရမ်းလှတာဘဲ လို့ သိလိုက်တာပါ . .ဘကြီးဇောတိက ဟာ တော်တော်ကံကောင်းတဲ့ လူဘဲ . .) ( ဟွန်း . .ဘိုဘို က တော်တော် မြှောက်တယ် . .ဘိုဘို ကော . .ဘာလို့ လူပျိုကြီး လုပ်နေတာလဲ ကြိုက်တဲ့ မိန်းမ မတွေ့သေးဘူး လား . .) ( အေးဗျာ ..ရတာမလို . .လိုတာမရ ဖြစ်နေတာ . .) ( ဟင် . .ဟုတ်လား. .ဘိုဘို ကြိုက်နေတဲ့ သူ ရှိနေလို့လား . .) ( အင်း . .ရှိတယ် . .ကျနော် သိပ် ကြိုက်သွားတဲ့ သူ က..မလွတ်လပ်တဲ့ အိမ်ထောင် ရှိသူ ဖြစ်နေတော့ ခက်နေတယ် မမဖူးရယ် . .) ( အို . .ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေကွာ . .အပျိုမလေးတွေ အများကြီး ရှိနေတာဘဲကွာ . .ဘာလို့ အအိုကိုမှ ကြိုက်ရတာလဲ . .) ( အပြစ်တင်ရင်လဲ ခံရမှာဘဲ မမဖူးရယ် . .အရမ်း ချစ်မိသွားတာကိုး . .အအိုက အပျို ရှုံး တယ်လေ . ...ကျနော်သိတာကတော့ . .အချစ် နဲ့ စစ်မှာ မတရားဘူးဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့ . .အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိဘူး ဆိုတာလေ . .) ( ဘိုဘို ရယ် . .လင်ရှိမယား ကို မချစ်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်ကွာ . .ငရဲကြီး လိမ့်မယ် . .လူတွေ လဲ ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ် . ..) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး မီးဖိုထဲက ထွက်ရန် ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သည် ..။ ( မမဖူး . .) ( အို . .ဘိုဘို . .) ဘိုဘိုသိန်း က သူမ လက်မောင်းကနေဆွဲ ခေါ်လိုက်လို့ ဘိုဘိုသိန်း ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သွားရလို့ ရင်ချင်းအပ်မိသွားရသောအခါ . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ထကာ ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း ခုံနေရပြီ . .။ ( မသင့်တော်ပါဘူး . .ဘိုဘို ရယ် . .) လင်ကြီး ငုတ်တုတ် နဲ့ ဒီလို လုပ်ဖို့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စိတ်မရဲပါ . .။ ခင်ပွန်း ဦးဇောတိကမင်းသိန်း သည် အိမ်ကြီး အပေါ်ထပ် မှာ အိပ်မောကျနေစဉ် မမ က အိမ်အောက်ထပ် မှာ သူ့ တူဖြစ်သူ နဲ့ ဖေါက်ပြားမည် ဆိုရင် အင်မတန်မှ အရုပ်ဆိုးလိမ့်မည် လို့ သူမ တွေးမိပြီး တွန်းဖယ် ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားလေ သည် . .။ ( လွှတ်ပါ . .ဘိုဘိုသိန်း . .ဒို့ က မင်း ဘကြီး ရဲ့ မိန်းမ ပါ . . မဖြစ်သင့်ပါဘူး . ..) ( မမဖူး ကို ကျနော် သိပ် ချစ်မိနေတယ်ဗျာ . .ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်ပါ . .) ဘိုဘိုသိန်း က နမ်းရန် ကြိုးစားလေ တော့ . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ အတင်း ဆောင့် ရုန်းကာ ထွက်ပြေးပါတော့ သည် . .။ တုန်ခါနေသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ တင်တွေကို ငေးမောရင်း ဘိုဘိုသိန်း ကျန်ခဲ့ရသည်. .။ တောက် .. လှလိုက်တဲ့ မိန်းမ . .ကြိုက်တယ်ကွာ . .။တအားကြိုက်တယ် . .. ။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ ဘိုဘိုသိန်း ကို နောက်တနေ့မနက်မှာ မျက်နှာချင်း မဆိုင်၇ဲ . .။ မနေ့ညက သူမ အပေါ်ထပ် ကို ပြေးတက်ခဲ့တော့ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း သည်တခေါခေါ နဲ့အိပ်မောကျနေဆဲပါ .. ။ သူမ . .ရေချိုးခန်းထဲ ကိုယ်လက်သန့်စင်သောအခါ သူမ ပေါင်လယ်ဂွဆုံ က မိန်းမ အင်္ဂါ သည် အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတာ တွေ့လိုက်ရပြီး ထမိန် အနောက်ဘက် တင်တွေ အောက်နားမှာလဲ စိုကွက်နေပေ သည် ။ အို . .ဘိုဘိုသိန်းများ တွေ့သွားလားမသိဘူး . .ရှက်လိုက်တာ . .ငါ ရင်တွေ ခုန်ပြီး .စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလို့ ဒီအရေတွေ စိုကုန်တာ ဖြစ်မယ် . .. ။ တတ်နိုင်ရင် သူမ သည် သည်တိုင်းပြည်ကနေ အမြန်ဆုံး ခွါချင် သည် .. ။ ဘိုဘိုသိန်း သည် တကယ်တော့ ကြည့်ကောင်းတဲ့ လူချောတယောက် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်လုံး ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် နဲ့ မိန်းမတွေ သဘောကျနှစ်ခြိုက်မဲ့ လူငယ်တယောက် ဖြစ် သည် .. ။ မိမိသာ လင်ကြီးငုတ်တုတ် နဲ့ မဟုတ်ဘူး ဆိုပါ က ဘိုဘိုသိန်းလိုလူ လာကြံစည်ပါ က လိုက်လျောမိမှာဖြစ်သည် . .။ လိင်တန်အတုနဲ့ မိမိဖါသာ အာသာဖြေနေရတာကို အားမရ ဘဲယောင်္ကျား လိင်တန် အစစ် နဲ့ အားရပါးရ ဖြေဖျောက်လိုက်ချင်စိတ် က မြန်မာပြည်မှာကထဲ က ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ရတာ ဖြစ် သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း သည် လူလစ်တာနဲ့ သူမ ကို ဖက်သည်. .။ ကိုင်သည် . .။ အခွင့်သာတာနဲ့ . .( မမဖူး ကို ချစ်တယ် . .) လို့ တိုးတိုး ကပ်ပြောသွား သည် .. ။နောက်တရက်မှာ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ရဲ့ ညီဝမ်းကွဲ ဖြစ်တဲ့ ဦးအံ့ထူးသိန်း ..အယ်အေ ( လော့အိန်ဂျလိစ် ) ကနေ ရောက်လာသည် ..။ မတွေ့တာကြာတဲ့ ညီအကို တွေ စကားပြောလို့ မကုန်နိုင်အောင်ဘဲ .. ။ဘိုဘိုသိန်း သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ကြည့်ကာ အသဲယားနေသည် .. ။ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် သူမ ကို ဦးအံ့ ထူးသိန်းတို့ က လက်ဆောင်ပေးသော အ၀တ်အစား တွေကို ၀တ်ထားသည် . .။
ပါးလွှာတဲ့ စကပ်ကြောင့် သူမ ကိုယ်လုံးတွေက ထင်းထင်း ပေါ်လွင်နေသည် . .။ လှလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီးတွေ . .အ၀တ်မပါဘဲ တွေ့ချင်လိုက်တာ . .။ ဘိုဘိုသိန်း . .စိတ်နဲ့ ပစ်မှားနေသည် . .။ မမဖူးရယ် . .သိပ် မိုက်တာဘဲဗျာ . ..။ ချက်ပြုတ်ရေး တာဝန်ယူနေသော ဒေါ်အေမီ က ဈေးဝယ်လိုတဲ့ စာရင်း လာပေး လို့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ဈေးသွားဝယ် ရန် ဦးဇောတိကမင်းသိန်း က ပြောပြီး ဘိုဘိုသိန်းကို လိုက်ပို့စေ သည် ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး တို့..ဈေးဝယ်ဖို့ ထွက်လာကြတော့ ကားထဲ မှာဘိုဘိုသိန်း ရဲ့ စိတ်တွေ တအားဖေါက်ပြန်နေသည် .. ။
( မမဖူး . .) ( ဟင် . .ဘိုဘို ..ဘာလဲ . .)
( မမဖူး . .သိပ်လှတယ်ဗျာ . .) ( အို . .ဘိုဘိုကလဲ . .)
စူပါမားကက်ကြီး ထဲ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့အနောက်ကနေ ဘိုဘိုသိန်း သူမ ရဲ့ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေး အောက် က စွင့်ကားပြည့်ဖြိုးတဲ့ တင်အိအိကြီးတွေကို ကြည့်ကာ တဏှာစိတ်တွေ ယိုဖိတ်နေသည် . .။ တင်သားစိုင်တွေ တုန်ခါနေတာ . .ကြည့်ရင်း သူ့ ငပဲကြီး ဆတ်ကနဲ ရုန်းထလာ သည် ..။ ဘိုဘိုသိန်း အကြံထုတ်နေသည် . .။( ဘိုဘို . .) ( ဗျာ . .မမဖူး . .) ( မမဖူး ..ရန်ကုန် ကို ခေါ်ဖို့ ဖုန်းကပ် ကောင်းကောင်း လိုချင်တယ်ကွယ် . .) ( ရတာပေါ့ မမဖူး . .မန်ဟက်တန် ထဲက ကျနော့် ဘော်ဒါ ..မိုးဇက်ဆီမှာ ၀င်ယူလိုက်ရုံပါဘဲ .. သူ တို့က ဖုန်းကပ်တွေ ဖြန့်ချီတယ် လေ . .) ဘိုဘိုသိန်း . .ညာလိုက်တာ . .။ မိုးဇက်တို့ ဖုန်းကပ် မဖြန့်ပါ .. ။ မမဖူး ကို သူပိုင် တိုက်ခန်းတခု ကို ညာခေါ်ကာ ကြမ်းလိုလို့ ဖြစ် သည် . .။ ( ဒါဆို ဈေးဝယ်ပြီး အပြန် ၀င်ယူနိုင်မလား . .) ( ရတာပေါ့ . .မမဖူး . .၀င်ယူကြမယ်လေ . .) သူတို့ ဈေးဝယ်ကြအပြီး . . ဆာကြတာနဲ့ မက်ဟက်တန် ထဲက တရုတ်တန်း ထဲ ၀င်ခဲ့ကြ သည် . .။( မမဖူး . .ဘာစားမလဲ . .ဘဲကင် ကောင်းတယ် . .ဖက်ထုပ်အပြုတ် သောက်မလား . .) ( ဘဲကင်တော့ မမဖူး မစားတော့ဘူးကွာ . .ဟင်းဟင်း..မမဖူး ၀မှာ ကြောက်တယ် . .အပြုတ်လောက်ဘဲ သောက်ချင်တယ် . .ဆန်ပြုတ် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ . .) ( ရတာပေါ့ မမဖူး . .ကျနော် လဲ ဆန်ပြုတ် သောက်ရတာ ကြိုက်တယ် . .အီကြာကွေးနဲ့ ပေါ့ .. ) ကားကို ကားရပ်ဂိုဒေါင်တခုမှာ ရပ်ထားခဲ့ပြီး ဘိုဘိုသိန်း သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး နဲ့ တရုတ်တန်းထဲ လျောက်ခဲ့ သည် .. ။ သူသိသော ဆန်ပြုတ်ဆိုင် ကို ရောက်တော့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးနဲ့ စားပွဲဝိုင်းလေးမှာ အတူထိုင် ကာ စားကြတော့ . .သူ တအားစိုက်ကြည့်နေတာကြောင့် . .( အို . .ဘိုဘိုရယ် . .ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် စိုက်ကြည့်နေရတာလဲ..မမ မနေတတ်ပါဘူး . .) လို့ မျက်စောင်းလေး ထိုးကာ ပြော လိုက် ရာ .. ဘိုဘိုသိန်း လဲ .( မမဖူး က သိပ်သိပ်လှနေလို့ပေါ့ . .) လို့ ပြောကာ လက်ကလေးကို ဆုတ်ကိုင်ထားလိုက်သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး က ရုန်းပေမဲ့ မရ . .။ ဘိုဘိုသိန်း က သူမ လက်ကလေး ကို ပွတ်နေလို့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကြက်သီးတွေ ထလာရ သည် ။ ဆန်ပြုတ်ဆိုင်က ထွက်ပြီး . .တရုတ်တန်းထဲ ဈေးဆိုင်တွေ လျောက်ကြည့် စဉ် ဘိုဘိုသိန်း က မသိမသာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ ထွာဆိုင် ခါးလေး ကို ဖက် သည် . .။ လူတိုးတဲ့နေရာတွေ ရောက်ရင် သူ့ လက်ဖ၀ါးက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ အိနေတဲ့ တင်သားစိုင်ကြီးတွေ ကို ကိုင်မိသည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း ရဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ကားထဲ ရောက်တော့ ဘိုဘိုသိန်း သည် အလွန်မှ ချောမောလှပနေသော သူ့ ဘကြီး ရဲ့ သမီးအရွယ်ဇနီးသည်လေး ကို ဆွဲဖက်ခါ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ကို ငုံကာ စုတ်နမ်းလေတော့ သည် .. ။ ( အို . .ဘိုဘို . .ရယ် . .. .) ( ချစ်တယ် . .မမဖူး .. အရမ်း ချစ်တယ် ဗျာ . .) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ လည်တိုင် ကိုလဲ နမ်းရှုံ့နေသည် .. ။ ( ဘိုဘို . ..သွားကြရအောင်ကွယ် . .ဖုန်းကပ် သွားဝယ်စို့ . .) ဘိုဘိုသိန်း လဲ သူ ဆင်ထားတဲ့အကွက် အတိုင်း လုပ်ရန် သတိရသွားပြီး . .ကားကို မောင်းထွက်ခဲ့လေ သည် . .။ နှစ်ယောက်စလုံး ..စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေကြသည် . .။ ကားမောင်းရင်း ဘိုဘိုသိန်းက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လက်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက် သည် . .။( မမဖူးရယ် . .သိပ် ချစ်တယ် ဗျာ . .) ( မဖြစ်နိုင်ပါဘူး . .ဘိုဘို ရယ် .. မမ က လင်ကြီးငုတ်တုတ် နဲ့ . .ဆိုတာ သိသားနဲ့ . .) ( ချစ်တာ ချစ်တာဘဲ ဗျာ . .ဘကြီး က ပန်းလဲ သေနေတာဘဲ . .မမဖူး ကျနော် နဲ့ ချစ်တာ တရားပါတယ် . .) ( မမဖူး ရှက်တယ်ကွာ . .ဘာတွေ လာပြောနေမှန်း မသိဘူး . .) ဘိုဘိုသိန်း အဆောက်အဦးကြီးတခုရဲ့ မြေအောက် ကားရပ်နားတဲ့ နေရာမှာ ကားကိုရပ်လိုက်သည် .။ (ေ၇ာက်ပြီလား . .ဘိုဘို . .) ( ရောက်ပြီ မမ ဖူး . ..အပေါ်ထက် ကိုတက်ရမယ်. . .) ဓါတ်လှေခါး နဲ့ ၅လွှာကိုတက်ခဲ့ ကြပြီး အခန်းတခု ကို ဘိုဘိုသိန်း က သော့ နဲ့ဖွင့်ဝင် သည် .. ။ ( ဟင် . .ဘိုဘို့မှာ သော့ရှိတယ် ဟုတ်လား . .) ( ဟုတ်တယ် မမဖူး . .ဒါ ကျနော်ကသူငယ်ချင်း မိုးဇက်ရဲ့ အခန်းလေ . .သူ က ဖုန်းကပ် ရောင်းတာ .) အခန်းထဲ ရောက်တော့ ဘယ်သူမှလဲ မရှိ . .။ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေသော အခန်းလေး . .။ ( ဘိုဘို . .ဘယ်သူမှလဲ မရှိပါလား . .ဘယ်မှာလဲ ဘိုဘို့ သူငယ်ချင်း မိုးဇက် ဆိုတာ . .) ( ထိုင်ပါအုံး မမဖူးရယ် . .အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ . .) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရိပ်စားမိသွားသည် .. ။ ဘိုဘိုသိန်း သည် သူမ ကို ညာခေါ်လာတာပါလား . .။ ( လာပါ . .မမဖူး . .) ဘိုဘိုသိန်း က ဆွဲဖက်ခါ ဆိုဖါကြီးပေါ်ကို ထိုင်စေ သည် . .။ ( အို . .) ဘိုဘိုသိန်း ကြမ်းပြီ .. ။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို နမ်းသည် . .။ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းသည် . .။ နဂိုကမှ သူမ စိတ်တွေ က နိုးကြားထကြွနေသည် .. ။ အခုလို အတင်းနမ်းစုတ်ဖက်ကိုင်နေတော့ တောင့်တခဲ့ရတဲ့ ကာမ အရသာတွေ ကို လိုလားလာ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း ကို မတားမိတော့ . .။ ဘိုဘိုသိန် အနမ်းတွေ မှာသာယာနေမိသလိုဘဲ . .။ ဆိုဖါကြီးပေါ်မှာ ပက်လက် ဖြစ်နေသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ အပေါ်က အုပ်မိုးပြီး . .ဘိုဘိုသိန်းသည် နမ်းရှုံ့နေရင်း က ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ စကပ်ကို လှန်တင်လိုက် သည် . .။ပေါင်တန်ရှည်တွေက ဖွေးဖြူနေသည် . .။ပင်တီအနက်လေး က သေးမျှင်လှသည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း ကိုယ်လုံး က ပေါင်တန်တွေကြားမှာ ရောက်နေလို့ ပေါင်တန်တွေ စေ့လို့မရ . .။ ကားပေးထားသလို ဖြစ်နေရတဲ့ အထဲ ဘိုဘိုသိန်း က သူ့ဒူးတွေနဲ့ ထပ်ပြီး တွန်းဖယ် ကားလိုက် သည် . .။ ဘိုဘိုသိန် ရဲ့ လျာကြီး က သူမ ပါးစပ်ထဲက လျာလေးကို ကလိနေသည် . .။ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကာမအရှိန်တွေ တက်နေပြီ . .။ သူမ ပင်တီအနက်လေး ကို ဘိုဘိုသိန်း ချွတ်ခွါတော့ သူမ သည် စွင့်ကားသော သူမ ရဲ့ ဖင်ကြီးတွေ ကိုကြွပေးလိုက်မိရ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို နမ်းစုတ်နေရင်းက သူ့ ဘောင်းဘီကို လက်တဖက်နဲ့ ချွတ်ပစ် သည် ..။အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲက သူ့ ငပဲကြီး က ထောင်နေသည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း ကိုယ်ကို လျောချကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပေါင်ကြားမှာ မျက်နှာအပ်လိုက် သည် .. .။ ဘိုဘိုသိန်းရဲ့ နှခေါင်းကြီး က သူမ အင်္ဂါစပ် ကို ထိကပ်ကာ နမ်းရှုံ့နေပြီ . .။ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ အင်္ဂါစပ် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အကောင်းစား ရေမွှေးနံ့ရလိုက် သည် . .။ ဟွန်း . .သူမ သည် သူမ ပေါင်ကြားဂွဆုံကိုပါရေမွှေး ဆွတ်ထားပါလား . .။ အို . .ဘိုဘို . ..ဖုန်းကံနိမ့်ကုန် တော့မှာဘဲ . .မလုပ်ပါနဲ့ . .။ ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ပြောနေပေမဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး..ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ စောက်ပတ်အယက်ကို ခံကြည့်လိုစိတ်တွေ ရှိနေသည် .. ။ အသက်ကြီးသော လင်ကြီး ဦးဇောတိက က သူမ ကို ဒီလို တခါမှ စောက်ပတ်ယက်မပေးဘူး . .။ သူငယ်ချင်း မော်မော်ပွင့် က သူမ လင် သင်္ဘောကက်ပတိန် ထက်အောင်ချို က စောက်ပတ်ယက်ပေးတာတွေ ပြောပြခဲ့တော့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အားကျခဲ့ သည် . .။ ဒါကြောင့် ဘိုဘိုသိန်း သူမ စောက်ပတ်ကို စနမ်းရှုံ့နေသောအခါ ..ရင်တလှပ်လှပ် နဲ့..အလွန်အမင်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေပေ သည် . .။
ဘိုဘိုသိန်း သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီး အနှံ့သူ့ နှာခေါင်းကြီးနဲ့ လိုက်နမ်းနေသည် . .။ သူ့လက်တွေက သူမ ကိုယ်အောက်ဖက် ကို ထိုးသွင်းကာ သူမ ရဲ့ တင်းအိနေကြတဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကို ဆုတ်နယ်နေသည် . .။ အသက်ကြီးသော လင်ကြီး နဲ့ဘဲ ထိတွေ့ဘူးသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ သန်စွမ်း ငယ်ရွယ်တဲ့ ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ အခုကဲ့သို့ ကြုံဆုံရတာကြောင့် ကာမစိတ်တွေ ပိုမိုထကြွနေပေ သည် . .။ဘိုဘိုသိန်းရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် .. သူမ ဖင်ကြီးတွေ မြောက်ကြွရမ်းကာနေတုံးမှာဘဲ ဘိုဘိုသိန်းရဲ့ လျာကြီး က သူမ အကွဲကြောင်းကြီးတလျောက် ပီပီပြင်ပြင်ကြီး စတင် ယက်ပေးလေတော့ရာ ..ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ..ဘာဂျာ ဆိုတဲ့ စောက်ပတ်အယက်ခံရခြင်း ဆိုတာကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့..ကြုံ ရလေပြီ . .။ ( အို . .ဘိုဘိုရယ် . ..အို . .ဟင် . .) ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းခါရင်း . .ဘိုဘို ယက်ပေးတာကို . .ခံနေရင်း . .သူမ ပေါင်တန်တွေကို ပိုလို့ ဖြဲကားပေးနေမိရ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်းမှာ သည်အခွင့်အရေးကို စောင့်နေတာ ကြာပြီ . .။ မမဖူးကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ထန်နေရတာကြာပြီ . .။
တအိမ်ထဲ နေတုံး မမဖူးကိုဘဲ သူ ချောင်းနေတာ . .။ဘကြီး ရဲ့ ဇနီးသည်လေး ဆိုတာကို သိရက် နဲ့ တဏှာစိတ်များနေခဲ့ရာက အခုလို အခွင့်လဲသာရော ဘိုဘိုသိန်း . .ကြမ်းတော့တာဘဲ .. ။ မမဖူး သူ့ကို ခိုက်သွားစေရန် သူ ဘာဂျာ အပြတ်မှုတ်ပေးလေပြီ။ ဘိုဘိုသိန်းရဲ့ လျာကြီး က တပြတ်ပြတ် အပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ ယက်ပေးနေရုံကမ သူမ စောက်ခေါင်းထဲကိုလဲ ထိုးမွှေနေတော့ ..( အာ...ဟာ..ဟာ...အာ...ဟာဟာ....) နဲ့ ဖင်တွေ ဘယ်ညာ ရမ်းခါလူးနေရသည် . .။ ပါးစပ်မှာ အရေတွေ ပေပွနေသော ဘိုဘိုသိန်း သည် ကုန်းမှုတ်နေရာက ခေါင်းထောင်ထပြီး . .( ကောင်းလား . .မမဖူး . .ကောင်းလား . .ကျနော် မှုတ်တာ ကောင်းလား . .) လို့ အလောတကြီးမေးလိုက်ရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ ..ခေါင်းကို တဆတ်ဆတ် ညှိမ့်ပြီး . .တုန်ရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ . .( ကောင်းပါတယ် .. ဘိုဘို . .အင်း . .အင်း . .ကောင်းတယ် . .) လို့ ဖြေလေ သည် . .။ဘိုဘိုသိန်းလဲ မမဖူးနှုတ်ဖျားက ကောင်းပါသည် လို့ ဖွင့်ဟပြောဆိုတာကို ကြားလိုက်ရတာနဲ့ ပိုမို ပားတက်သွားရပြီး . .ဖိဖိယက်လေရာ တချို့လျာချက်များ သည် ချော်ထွက်သွားပြီး မမဖူးရဲ့ စအို ဖင်ပေါက်လေးကို ပါ ယက်မိတော့ရာ မမဖူး တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ကို သူ တွေ့ရသည် . .။
ကာမရာဂစိတ်တွေ အလွန်အမင်း ပြင်းထန်နေတာကြောင့် ဘိုဘိုသိန်းမှာရွံရှာတဲ့စိတ်လုံးဝ မရှိဘဲ မမဖူး ရယ် . .အရမ်း ချစ်တာဘဲလို့ရေရွတ်နေပြီး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ စအိုပေါက်နီနီလေးကို ပါ လျာကြီးနဲ့ ထိုးကလိလိုက် . .ယက်ပေးလိုက်နဲ့ အစွမ်းကုန်ကျဲလေပြီ . .။ဒေါ်ဝင့်ဝင့် ဖူးမှာ ကောင်းလွန်းလို့ ဘိုဘိုသိန်းရဲ့ခေါင်း က ဆံပင်တွေကို ဆုတ်ကိုင်ရင်းခါးလေးကော့ကာ . .ကာမ လမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းသွားရသည်..။ တကိုယ်လုံး ကျင်တုန်ပြီး . စောက်ရေတွေ ဆစ်ကနဲဆစ်ကနဲ . .ထွက်ခါ ပြီးသွားရ လေ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်းလဲ . .ကျန်ရှိနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ကို မတ်တပ်ရပ်ခါ ချွတ်လိုက် သည် . .။ သူ့ လိင်တန် ညိုညိုကြီး မားမားမတ်မတ်ကြီး ထွက်ပေးလာ သည် . .။ အိုကွယ် . .ကြီးပြီး ရှည်လိုက်တာ ..အကိုကြီးဟာနဲ့တခြားစီပါလာ.။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး..လိင်တန်ထွားထွားကြီးကိုအနီးကပ်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ.ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထ သွားရလောက်အောင် ရင်တွေတုန်..စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွားရလေ သည် .. ။ ( မမဖူး . .ချစ်ကြရအောင် . .) လို့ ဘိုဘိုသိန်း က ပြောရင်း ..သူမပေါင်ကြားမှာ နေရာဝင်ယူလိုက်သည် ..။ ဘာဂျာအပီမှုတ်ထားတဲ့ အရေတွေစိုရွှဲနေတဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ စောက်ပတ်ကြီး ထဲကို ဘိုဘိုသိန်း သူ့လိင်ချောင်းကြီး ထိုးသွင်းလိုက် သည် . .။
တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး . .ပြိကနဲ ..၀င်လာသည် . .။ ( အိုး . ..ဟင့် . .. ) လင်ဖြစ်သူ ဦးဇောတိက ရဲ့ လိင်တန်ထက် အဆပေါင်းများစွာ တုတ်သောရှည်သော ဘိုဘိုသိန်း ရဲ့လိင်တန်ကြီး နဲ့အထည့်ခံလိုက်ရတာ .. သူမ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေကို လိင်တန်ကြီး က အတင်းကာရောကြီး ပွတ်တိုက် ..တာခံလိုက်ရတာကြောင့် အကြောပေါင်းတထောင် စိမ့်တက်ခါ .. ကာမအရသာထူးထူးကဲကဲ ရရှိလိုက်ပေ သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်း က ဆိုင်းနေတတ်သူမဟုတ်ပေ . .။ ဒီမမလှလှကြီး ကို သူ လိုးချင်နေတာ ကြာပြီမို့ . .ရတုံး အမြန်ထည့်တော့သည် . .။ လိုးပါတော့သည် .. ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်ကြီး . .။ ဘကြီး ဖြစ်သူ က ပန်းကလဲသေနေတော့ ဒီမမလှလှကြီး တော်တော် ဆာလောင်နေမည် ကို သူ စောစောကြီးထဲက သိ သည် . .။ လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့ . . အလိုးမခံရတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးမို့ . .လိုးလိုက်တိုင်း စီးတင်းတင်း နဲ့ ကောင်းလိုက်တာ . .။ အင်းအင်း . နဲ့ အားယူကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးသမျှကို ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး . .အရသာရှိစွာ ခံနေသည် . .။ မျက်စိလေးမှေးစင်းကာ . .ထိမိနေတဲ့ လီးနဲ့ စောက်ပတ် ပွတ်တိုက်မှုကို သူမ ခံစားနေသည် . .။ ဘိုဘိုမှာလဲ .ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီး ကို လိုးခွင့်ရတာကိုဘဲ ကျေနပ်မဆုံး ဖြစ်နေပြီး သူပြီးဖို့ထက် ကာမအရသာ ကို မရဘဲ ပြတ်လပ်နေတဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကောင်းဖို့ကိုဘဲ ဦးစားပေးကာ လိုးလေသ ည် .. ။ ဒေါ်ဝင့်ဝင်ကဖူး ပြီးမှ သူ ပြီးမည် ဆိုပြီး ..လိုးသည် . .။ လိုးဆောင့်ချက်တွေ ကမြန်လာသည်..။ ပြင်းလာသည် ..။တအင့်အင့်နဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး..ဖင်ကြီးတွေကို မြှောက်ပေးသည် .. ။ဒလစပ်ဆောင့်ပေးနေတာကို သူမ သိပ်ကြိုက်နေသည် . .။ သူမကလဲ အောက်ကနေပြန်ပင့်ပေးနေသည် . .။ ( ကောင်းလား..မမဖူး . .) ( သိပ်သိပ် ကောင်းတယ် . .) မောဟိုက်တဲ့ အသံတုန်တုန်နဲ့ ပြန်ဖြေတဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ အပေါ်ပိုင်း အင်္ကျီကို ဘိုဘိုသိန်း စလိုးစဉ်မှာဘဲ ချွတ်ခွါထားတာမို့ နို့ဖြူဖြူကြီးတွေ သည် တပ်မက်စရာ လိုးဆောင့်တိုင်း လှုပ်ခါလျက်ရှိနေပေရာ ..တဖန်းဖန်း . .ဆောင့်ပေးနေရင်း အဲဒီနို့ကြီးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့ပေးနေပြန်သည် . .။ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ ကောင်းသထက်ကောင်းလာသည် . .။တအား ဆောင့်စေချင်လာသည် .. ။ အောက်ကနေတအားကော့ပေးလာသည် . .။ မိန်းမ ကျမ်းကျေနေသော ဘိုဘိုသိန်း ရိပ်စားမိသည် . .။ မမဖူးတယောက် ပြီးခါနီးလာပြီဆိုတာ . .။ သူမ ခါးကနေဆွဲကိုင် ကာ..သွက်သွက်လေး ညှောင့်ပေးပြီ. .။ ဘိုဘိုသိန်း လိုးညှောင့်ချက်တွေ က အားပါသည် . .။ အင်..အင်.. .မြန်မြန် . . .မြန်မြန်.. ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး. .နုတ်ဖျား က ပွင့်ထွက်လာ သည် ..။ ဘိုဘိုသိန်း စက်၇ုပ်တရုပ်အလား .. ဒလစပ် အမြန် ညှောင့်သည် . .။ဆောင့်သည် . .။ သိပ်မကြာလိုက် . .။ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး..ကော့တက် ခါ ..တအီးအီးအော်ရင်း ပြီးသွားသည် . .။အဟတ်..အဟတ်..အင်း . .. အင်း....နဲ့ ညည်းရင်းမျက်စိစုံမှိတ်ခါ ပြီးသွား သည် .. ။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အပြီးကို စောင့်နေသော..ဘိုဘိုသိန်းလဲ ဆက်ပြီးလိုးဆောင့်ရင်း..ပြီး လိုက်သည် .. ။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ..စောက်ခေါင်းထဲကို သုတ်များ တဗျစ်ဗျစ်ပန်းထုတ်မိရင်း ဘိုဘိုသိန်း ပြီးသွားပါ သည် . .။ ( ကောင်းလိုက်တာ မမဖူးရယ် . .မမဖူးကော ကောင်းလား..ဟင် . . .) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ ခေါင်းလေး ညှိမ့်ပြရင်း . .( သိပ်ကောင်းတယ် . .) လို့ ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ဖြေ သည် ..။
ခဏ အမောဖြေနေပြီး ..ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ..ရေချိုးခန်းကို ၀င်ကာ ပေကျံနေတာတွေကို ဆေးကျော သည် .. ။ ဘိုဘိုသိန်း က နောက်တချီထပ် လိုးချင်နေပြီ . .။ ( ဘိုဘို . .နောက်မှကွယ် . .အကိုကြီး စိတ်ပူနေမယ် . .ပြန်ကြရအောင် . .) ဘိုဘိုသိန်း လဲ ..မပြန်ချင်သေးဘဲ ပြန်လိုက်ရသည် . .။ ဓါတ်လှေခါး နဲ့ အောက်ထပ် အဆင်းမှာ ဘိုဘိုသိန်း သည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ခါးသိမ်လေးကို ဖက်ထားပြီး သူမ ပါးပြင်လေးကို နမ်းတော့ . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ .. ( ဘိုဘို . .မကဲနဲ့ကွာ . .တော်ကြာယူ့ဟာာကီး ထောင်ထ လာမှ လူကြားထဲ အရှက်ကွဲနေမယ် . .) လို့ ပြုံးစိစိ နဲ့ပြောသည် . .။ အိမ်အပြန် ကားပေါ်မှာလဲ ဘိုဘိုသိန်းရဲ့ လက်တွေ က ( လူပျို့လက်..၀က်မြီး ..) ဆိုသလိုဘဲ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ ပေါင်တန်တွေပေါ်မှာ..ပြေးလွှားရောက်ရှိနေသည် . .။ ( ဘိုဘို က သိပ်ကဲတာဘဲ ကွယ် . .အရူးအမဲသားကျွေးမိ . .ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ . .) လို့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး . .ညည်း သည် . .။ ညစာ စားတဲ့ အချိန်မှာ လဲဘိုဘိုသိန်း သည် စကားကောင်းနေသော အယ်လ်အေက သူ့ ဦးလေးဦးအံ့ ထူးသိန်း နဲ့ ဘကြီး ဦးဇောတိက တို့ အလစ်မှာ စားပွဲအောက်မှနေပြီး သူ့ခြေထောက်နဲ့ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ခြေထောက် ကို ထိတွေ့ပွတ်သပ် သည် . .။ ဦးအံ့ ထူးသိန်း က ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ကို အယ်လ်အေမြို့ကို လိုက်လည်ရန် ခေါ်နေသည် . .။ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း က ဆရာဝန်ပြရန် ရှိလို့ မလိုက်လိုတော့လို့ ပြောသည် . .။ ညပိုင်း ညီအကိုနှစ်ယောက် အိမ်ကြီး အပေါ်ထပ်မှာ စကားကောင်းနေတုံး . ဘေ့စ်မင့် ( မြေအောက် ခန်း )ထဲမှာ . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ဘိုဘိုသိန်း သည် အ၀တ်လျော်စက်အပေါ်မှာတင်ကာ သူက မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေအထားနဲ့ လိုးနေပေ သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ထောင်ကာ ဖေါင်းမို့ ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးထဲ ဒလကြမ်း လိုးဆောင့်နေ သည် . .။ ( အို . .ရှီး .. .အို...ရှီး . ..အား . ..အား . .) ( ကောင်းလား..မမ )( အင်း...အင်း . .) ( ကျနော့်လီးကိုကြိုက်လား . .) ( ကြိုက်တယ် . .) ( မမကို လိုးပေးပါ လို့ ပြော..ကြားချင်တယ် . .) ( မမကို လိုးပေးပါ . .ဘိုဘို..မမကို လိုးပေးပါ . . ) အရေတွေတအားစိုရွှဲနေတာကြောင့် တဖွတ်ဖွတ်တဖပ်ဖပ် အသံတွေ ထွက်နေသည် .. ။( အား . .. အား . . လိုး . .လိုး . .ဆောင့်ပါ..လိုးပါ...ဆောင့်ပါ . .) ဘိုဘိုသိန်း ဆက်တိုက် ဆွဲပြီ . .။ ( အိုး . .၀ိုးဝိုး . .. ကောင်းလှချည်လား . .လိုး . .လိုး . . ) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး .. ကာမဇောကပ်နေပြီ . .။ မရှက်တော့ဘဲ . .တအားလိုးပေးဖို့ တောင်းခံနေသည်.. ။ ဘိုဘိုသိန်း က ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို အ၀တ်လျော်စက်ပေါ်က ဆင်းခိုင်းပြီး..ကြမ်းပြင်မှာ ခေါင်းအုံးချပြီး ခေါင်းအုံးပေါ် ဒူးထောက် ခါ ဖင်ကုန်းခိုင်း သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး လဲ တအားထန်နေပြီ . .။ လိုးနေဆဲ အရှိန်ကောင်းတုံး . .ဖင်ကုန်းခိုင်းလို့ ..အရှိန်ပျက် သွားပေမဲ့ . .ဘိုဘို ကျေနပ်အောင် ကုန်းပေးလိုက် သည် . .။ ဘိုဘိုသိန်းလဲ အနောက်ဖက် ကို ပြူးထွက်နေသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ စောက်ပတ်ကြီး ကို အားနဲ့ မာန်နဲ့ လိုးဆောင့်ပေးပါတော့သည် . .။ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေးကို လက်၂ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ဆုတ်ပြီး ဆောင့်နေသည် .. ။ ဖင်ပေါက်နီညိုညိုလေး ကို မြင်နေရတာ အသဲယားနေပြီး သူ့ လက်ညှိုးနဲ့ ဖင်ပေါက်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့ . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး မှာ.. ( ဘာလုပ်တာလဲ . .ဘိုဘို . ..အဟင့် . .ဖင်ပေါက် ကို ဘာလို့ ကလိနေတာလဲ . .) လို့ မေးသည် . .။ ဘိုဘိုသိန်းလဲ . .( လိုးချင်လို့ မမဖူး . .ဖင်လိုးကြည့်ချင်တယ် . .)လို့ဖြေရင်း . .စောက်ဖုတ်နဲ့ လီးတပ်ထားတဲ့ နေရာက အရေတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ ကလော်ပြီး . ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရဲ့ စအိုပေါက် ထဲကို ထိုးထည့်ကာ မွှေရင်း ကလိနေသည် . .။ ဒေါ်ဝင်က၀င့်ဖူး လဲ ဖင်အလိုးခံရမှာ လန့်ပြီး ..ကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ထောင်ထသွားရ သည် . .။ ( မမ ဖင်ပေါက်လေးတော့ ချမ်းသာပေးပါ . .ဘိုဘိုရယ် . .စောက်ပတ်ကို ဒီလောက် တ၀ကြီး လိုးနေရပြီဘဲ ကွယ် . . .) ဘိုဘိုသိန်း ကတော့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပြောစကားကို နားမထောင်ပါ .. ။သူ့ လက်မ ကို စအိုပေါက်ထဲထိုးဆွကလိပေးနေပြန် သည် . .။ စောက်ပတ်ထဲ လိုးနေတာကိုလဲ မရပ်လိုက် . .။ ဆက်တိုက်ဘဲ လိုးဆောင့်နေသည် . .။ ( အဟင့်အဟင့် . .ဘိုဘို . .မမ ဖင်ပေါက်လေးကို မလုပ်ပါနဲ့ကွာ . .စောက်ပတ်ကိုဘဲ လုပ် . .) ထိုအခိုက် . .. ( ဖူးဖူး...ဖူးဖူး..အောက်ထဲမှာ ရှိလား . . .) ဆိုတဲ့ ..ထမင်းချက်ပေးနေသူ ဒေါ်အေမီ ရဲ့ အသံကြောင့် နှစ်ဦးစလုံး..ခေါင်းနဘန်းကြီးသွား သည် . .။ ( ရှိတယ် . .အန်တီအေမီ . .ဘာလိုလဲ . .လာပြီ . .လာပြီ . .) ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး က အသံပေးလိုက်သည်..။ လီးကြီး ကို ဆွဲနုတ်လိုက်တော့ ..ဘွက်ကနဲ အရေတွေ ထွက်ကျလာ သည် .. ။ ဂါဝန်ရှည်ကြီးကို အမြန် ပြန်ဝတ်ပြီး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အိမ်ပေါ်ထပ်ကို တက်သည် . .။ လစ်ရင်လစ်သလို ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးတို့ လိုးကြသည် . .။ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ခွဲစိတ်တဲ့ရက်ကိုရောက်လာသည်.။ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ ၃ရက် ..ဒေါ်အေမီကလဲ သူနာပြုအဟောင်းတယောက်မို့ ဆေးရုံမှာ သွားစောင့်ပေးရာ အိမ်မှာ ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်နေသည် . .။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ပြီ . .။ ဘိုဘိုသိန်း သည် မနက်လေး..ညခြောက်..ထမင်းစားပြီးတစ် . .ဆိုသလို . .တနေကုန် မီးကုန်ယမ်းကုန် လိုးလေ သည် . .။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး က . .( တော်ပါအုံး..ဘိုဘိုရယ် . .မမဖူး . .စောက်ပတ်တခုလုံး ဖွာနေသလိုဘဲ ခံစားရတယ် . . ကျိန်းစပ်နေပြီ . .) လို့ တားယူရတဲ့ အထိပါဘဲ . .။
( မမဖူး ရန်ကုန် ပြန်သွားရင် . .လိုးရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ . .) ဘိုဘိုသိန်း က ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို မှောက်အိပ်ခိုင်းပြီး စွင့်ကားတဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို တဖန်းဖန်း လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်ရင်း . .ပြောသည် . .။ ( ရန်ကုန် လိုက်လာပေါ့ကွာ . .) ( တကယ် လိုက်လာမှာ . .) ( လိုက်လာခဲ့ မမဖူး တင်မက မမဖူး ရဲ့ သူငယ်ချင်းမော်ပွင့် ကိုပါ လိုးချင်လဲရတယ် . .မော်ပွင့် က ဆာနေတာ . .သူ့လင် က သင်္ဘော လိုက်ရင် အကြာကြီးဘဲလေ . .) ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ဆေးရုံ က ဆင်းပြီ .. ။ မကြာခင် မြန်မာပြည် ပြန် ရတော့မည် မို့ ဘိုဘိုသိန်း .. ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို ဈေးဝယ် အကြောင်းပြပြီး . .မန်ဟက်တန် က အရင် သွားလိုးဘူးခဲ့တဲ့ တိုက်ခန်းလေး ကို ခေါ်သွားကာ လိုး သည် . .။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် လိုးခဲ့ပြီးမို့ ..ပုံစံတွေ လဲ အမျိုးမျိုး တတ်နေပြီ . .။ ဘိုဘိုသိန်း ၇ဲ့ လီးတန်ကြီးကို လဲ အားရပါးရ စုတ်ပေးနေပြီ . .။ ( မမ ဆီကို ကျနော် လိုက်ခဲ့မှာနော် . .) ( လိုက်ခဲ့ ဘိုဘို . .ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံမယ်. ..) ဦးဇောတိကမင်းသိန်း နဲ့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး တို့ ..မကြာခင် မြန်မာပြည် ပြန်ကြ သည် . .။ယခုထိတော့ ဦးဇောတိကမင်းသိန်း ရဲ့ အခြေမနေက မသိရသေး . .။
ရန်ကုန် ကိုပြန်နေတုံး လေယာဉ်ပေါ်မှာဘဲ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး သည် . .ဘိုဘိုသိန်း နဲ့ နှစ်ပါးသွားခဲ့ရတာတွေကို ပြန်လည် မြင်ယောင်သတိရမိတော့ စိတ်တွေ နိုးကြွလာရပြီး . .ခံချင်စိတ်တွေ တဖွါးဖွါး ပေါ်ပေါက် လာရပြန် သည် . .။ ထို့အတူဘဲ..ဘိုဘိုသိန်းသည်သူလှို့ဝှက်စွာနဲ့ရိုက်ထားခဲ့တဲ့သူနဲ့ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး..လိုးနေကြတဲ့ဗွီဒီယိုကိုသူ့ နုတ်ဘွတ်က် ကွန်ပြူတာလေးမှာပြန်ကြည့်၇င်းလီးကြီးမတရားတောင်မတ်လျက်..စိတ်တွေ တအားနိုးကြွဖေါက်ပြန်ကာ ..သူ့ လီးကြီးကို ကွင်းတိုက်ကစားရင်း . .ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ကို တမ်းတ လွမ်းနေပေ သည် . .။